Mr. Mangina, Indrindra Pool mitondra zava-baovao ao amin'ny Interbad Heat Pump 2018 - Aquark Electric Co., Ltd
Mr. Mangina, Indrindra Pool mitondra zava-baovao ao amin'ny Interbad Heat Pump 2018
Izany no fotoana voalohany mba hanatrika Interbad tany Stuttgart, any Alemaina. Misaotra anareo rehetra noho ny fandraisany ny fotoana mba hitsidika ny trano heva. Izy io dia fahafahana hanao zavatra lehibe sy hanakalo hizara ny heviny sy ny zavatra niainany mikasika ny inverter dobo hafanana eran-tany paompy amin'ny mpanjifa. Velom-pankasitrahana indrindra izahay noho ny fahalianan'izy ireo amin'ny manam-paharoa slab famolavolana inverter - Mr. Silence.
Mr. Fahanginana no zava-baovao indrindra dobo hafanana paompy ao amin'ny fampirantiana rehetra. Izany dia efa tsara eken'ny mpanjifa avy amin'ny firenena isan-karazany tao amin'ny fampisehoana. Baiko maro no efa nanamarina teo no ho eo, izay Tena nampahery anay.
Nahoana no Mr. Fahanginana ny zava-baovao indrindra vokatra?
Noho ny orinasa mpamorona. Izy io dia liana ekipa izay te-hamorona zava-dehibe ho an'ny mpanjifa sy ny mpanjifa. Simple mahazatra mikasika maso,-jaridainany sariaka fisaka ambonin'ny famolavolana ... tsipiriany rehetra manompo noho ny antony iray fotsiny: mba ho mpanjifa traikefa ny tsara indrindra. Rehefa mitohy Optimization sy ezaka vaovao, mitondra zava-baovao indrindra izany vokatra teraka tamin'ny farany, izay nanova soa aman-tsara ny fitsaratsaram-poana ny nentim-paharazana inverter dobo hafanana paompy.
Ankoatra izany, dia efa raikitra soa aman-tsara ny mpiara-miasa manokana tany Alemaina nandritra ny fandaharana. Izany dia midika hoe eo an-toerana fivarotana mpivarotra sy ny tompon'ny dobo dia afaka mividy Mr. Fahanginana mivantana any Alemaina! Raha toa ianao ka liana amin'ny Mr. Fahanginana saingy tsy afaka hitsena anay amin'ny Interbad, dia aza malahelo avy ny seho manaraka, Piscine Global Eoropa 2018 any Lyon, any Frantsa. Avia, hiresaka aminay mifanatrika, ianao dia hianatra bebe kokoa momba Atoa inverter Fahanginana sy ny fianakaviana.
Aoka ny misambotra ny INVERTER afaka miara-mahita anao amin'ny trano rantsan-kazo 5D126 in Lyon!
Post fotoana: Oct-31-2018